Paul Rogé wuxuu ku biiray McKnight bishii Luulyo 2021 isagoo ahaa sarkaalka sare ee barnaamijka barnaamijkeeda Caalamiga ah. Rogé wuxuu hogaamiyaa oo horumariyaa cilmi-baarista sayniska ee biophysical ee Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada ee Mu'asasada, kaas oo la shaqeeya beeralayda yaryar, hay'adaha cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta si loo hagaajiyo helitaanka degaanka, waarta, nafaqada leh loona abuuro nidaam cunno caalami ah oo cadaalad ah.
Kahor intuusan imaan McKnight, Rogé wuxuu ahaa borofisar iyo lataliyaha cilmi baarista ee Merritt College ee Oakland, CA, halkaas oo uu ku baray koorsooyin ku saabsan agroecology-ga magaalooyinka. Intaa waxaa dheer, Rogé wuxuu u adeegay kuxigeenka guddiga manhajka kulliyadda.
Markii hore, inta lagu gudajiray cilmi baaristiisa takhasuska ee Oaxaca, Mexico, Rogé wuxuu sameeyay cilmi baaris kaqeybqaadasho ah oo udub dhexaad u ahayd beeraleyda wuxuuna adeegsaday habab byofisiyaal transdisciplinary ah. Shaqadiisii dhakhtarnimada ee Malawi wuxuu ku qiimeeyay suurtagalnimada dalagyada cunnada ee caadiga ah. Wuxuu sidoo kale isku dayay inuu isu keeno beeraleyda yaryar ee California iyo cilmi baarayaasha si ay si fiican u fahmaan sida nidaamyada kala duwan ee beerashada u saameeyaan caafimaadka carrada. In ka badan 20 sano, Rogé wuxuu xooga saaray cilmi baaris iskaashi oo lala yeesho beeralayda.
Rogé wuxuu haystaa shahaadada PhD ee sayniska sayniska, siyaasadda, iyo maaraynta ee Jaamacadda California, Berkeley. Wuxuu ku hadlaa afar luqadood. Marka lagu daro luqadihiisii ugu horreeyay ee Ingiriisiga iyo Faransiiska, wuxuu ku fiicnaaday Isbaanishka iyo Boortaqiiska cilmi baaristii takhasuska ahayd ee Mexico iyo labo sano oo uu deggenaa Brazil.
Waxqabadyadiisa kale ee xirfadeed waxaa ka mid ah u adeegida xubin ka mid ah guddiga Agroecology Commons, Guerrilla Cartography, Iskuulka Cusub ee Iskaashatada ee Daraasaadka Magaalooyinka iyo Caddaaladda Deegaanka, iyo Dahabka 'Golden Gate Cohousing'.